Okunye kwalokho uFedora asilethela khona 17 | Kusuka kuLinux
Okunye okusilethela iFedora 17
Izindaba ezizokufaka sezishicilelwe I-Fedora 17 ku Iphrojekthi Wiki futhi njengoba kujwayelekile kulokhu kusatshalaliswa, kuzosilethela ukuthuthuka okuthakazelisayo okuzofanele ukuzama.
Ngaphandle kokungabaza enye yezinto ezithakazelisa kakhulu yi ukuhambisa amafayela nezilungiselelo de / bin, / sbin y / lib a / usr, kusetshenziswa izixhumanisi ezingokomfanekiso, okuthile obekuvele kuxoxwe ngakho ku- Lesi sihloko. Lokhu kuletha inhlangano enkulu nokuhlanzeka ohlelweni lwamafayela, manje okulandelayo:
Umsebenzi wesikhombi ngasinye kuzoba okulandelayo:
/ usr - Uhlelo olufakiwe; Amafayela okwabelwana ngawo; Funda kuphela okungenzeka.
/ njll - Idatha yokulungiselela ayinakwabiwa.
/ var - Idatha eqhubekayo, engabiwa
/ run - Idatha eguquguqukayo, engabelwana ngayo; Kuyadingeka kohlelo lwefayela le-tmpfs.
I-Fedora 17 kufaka phakathi ezinye izinto ezintsha, njenge Thuthukisa i-1.48, IGnome-Shell ngeke kudinge ukusheshiswa kwe-3D ukuthi kwenziwe, Ama-Btrfs ngokuzenzakalela, ukuhlanganiswa okungcono ne- IphaketheKit, Uhlelo olusha lokuhlola ikhwalithi yamaphasiwedi, nokunye okuningi esingakubona kuthebula elilandelayo:
80% Thuthukisa i-1.48 Vuselela ukukhuphula ukukhululwa okuphezulu (kwakamuva) kwe-1.48. 2011-12-17
0% Uhlelo lwefayela oluzenzakalelayo lwe-BTRFS Yenza i-BTRFS ibe isistimu yefayela ezenzakalelayo yokufaka okujwayelekile. 2011-11-15
75% ConsoleKit Ukususwa futhi okuzenzakalelayo Isihlalo Support Isikhwama sokubamba sokuhlanza okuncane nokwenza ngcono konke okuhlobene neseshini nokuphathwa kwezihlalo. 2011-07-27
80% Abashayeli be-DRI2 Kuphela Thumela kuphela abashayeli be-DRI2 3D ku-F17. 2011-11-17
10% Ukunikezwa kwesoftware kwe-gnome-shell Yenza i-gnome-shell isebenze ngokunikela nge-software kuma-hardware amaningi]] 2011-11-21
100% Umbhalo 2 Keymaps amamephu wokhiye we-m17n wezilimi ze-Indic alandela okujwayelekile okusalungiswa okuthuthukisiwe kwe-Inscript (Inscript2). 2011-11-15
100% I-KDE Plasma Dependency Generation kanye nePhakhejiKit Integration Faka ukuncika kwe-RPM okwenziwe ngokuzenzakalela kwezinsizakalo ezihlobene nezingwegwe ze-KDE Plasma nePakejiKit ukuzisebenzisela iPlasma. 2011-12-03
50% Hambisa konke uye / usr Nikeza ngendlela elula yokufaka cishe lonke uhlelo lokusebenza olufakiwe lokufundwayo kuphela, ukulithwebula nge-athomu, noma ukuwabele phakathi kwabasingathi abaningi ukonga isondlo nesikhala. 2011-11-22
80% I-ns-3 Network Simulator I-discrete-network network simulator yezinhlelo ze-Intanethi, ezibhekiswe ikakhulukazi kucwaningo nokusetshenziswa kwezemfundo. 2011-12-05
30% I-SysV iye ku-Systemd Ukuhambisa kusuka kumibhalo ye-sysVinit init kumafayili amayunithi we-systemd. 2011-11-04
40% i-virtio-scsi Isakhiwo esisha sesitoreji se-KVM esisuselwa ku-SCSI. 2011-07-14
Ngifisa futhi konke okunye ukusabalalisa kungalandela isibonelo se- Fedora.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Okunye okusilethela iFedora 17
Hahahaha super Debian ayilethi kangako huh ???? I-LOL
Njengenjwayelo uFedora uletha izindaba eziningi ngenguqulo entsha ngayinye
Izindaba eziningi kakhulu kwesinye isikhathi ezidala izinkinga!
Ngaphambi kokufaka i-Fedora, qiniseka ukuthi ayikhishwanga izinsuku ezimbalwa ngoba kungenjalo ...
Sengivele ngisebenzise uFedora futhi angizange ngibe nezinkinga, empeleni
IFedora, njengoba kwaziwa, ingelinye lama-distros ayingozi kakhulu uma kukhulunywa ngokuhlanganisa izici ezintsha nezinguqulo zakamuva zamaphakeji. Yilapho lapho ebeka khona ingxenye yobunikazi bakhe nobuhle bakhe. Kungakho kungafanele kusimangaze ukuthi kunengozi yokuhlangabezana nenkinga (ikakhulukazi lapho kusanda kukhishwa inguqulo entsha). Kodwa-ke akuhlali kunjalo. Esimweni sami, ngokwesibonelo, ibibulala ngeFedora 14, kepha kahle kakhulu ngezinguqulo 15 no-16 ngokuya ngokuzinza.
Ucabanga ukuthi uyifaka i-Debian, i-LMDE, i-Arch noma i-Fedora ... Iyiphi i-kernel ezophathwa yi-Fedora 17?
Ngidinga i-kernel 3.2 ukuze i-broadcom yami isebenze ... 🙁
Faka i-Arch, rolling release KISS
Bengine-Arch, kepha angikwazanga ukuthola i-broadcom ukuze ngisebenze ne-ndiswrapper, ingasaphathwa eyomshayeli we-linux. Yeka ukubheda haha, yonke into "ngiyabonga" ku-Apple ... kuphela lokho okungihlulekayo, futhi bheka, ngithanda i-Arch ...
Ake sibheke ukuthi ngolunye usuku ngithola ...
I-PS: Impela ukuthinta okuthile ku-rc.conf kusombulula yonke into Haha.
Ngincoma ukuthi ubheke uhlu lokuhambisana kwehadiwe ngaphambi kwanoma yini enye
I-kernel iyalandwa futhi ihlanganiswe uma kunesidingo, lokho kuncane kakhulu, empeleni kukhona okokufundisa okuhle nokufushane kokuthi ungakwenza kanjani lokho 🙂
I-Pfff uma iFedora iyiRollign ngicabanga ukuthi izosusa i-arch yami
Kepha bekungeke kube yi-KISS
I-Fedora inokuqalisa okubushelelezi futhi okuhle kunawo wonke ama-distros…. kepha kuhamba ngejubane eligcwele futhi nami ngingakwazi. Kungani bengenzi ukugoqa noma okungenani i-LTS? Kuthiwani nge-Fedora-based distros? Uma Ubuntu yenze okuhle nokubi ngokufanayo.
Ubuntu buya ngokushesha
yebo, kepha hhayi ngokushesha njengamawindi akho.
kahle, ngisebenzisa i-fedora 16 futhi iqiniso ukuthi i-fedora ayikaze ingidumaze, njengoba "i-linux windows" ibilokhu yenze njalo.
Ngingathanda ukusho okufanayo, nganginekhanda eliningi ngeFedora 15 no-16, ngaze ngayeka ukusebenzisa iLinux nokuhlela ngezilimi zamahhala. Ubuntu ngokudabukisayo waba umbhedo kusukela ku-11.x edition
UJavier del Cristo kusho
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngishintshe ukusuka kumawindi ngaya kwi-linux, ngaqala ukuhlola nge-ubuntu, futhi ekuqaleni ngangikuthanda, kepha lapho ngizama ukusebenzisa amandla ezinye zezinhlelo ezizilethayo, ngakuthola kunzima kakhulu. Njengesibonelo, izinhlelo ngenkathi besebenza bangivalela, ekuqaleni bekungumbhedo omkhulu ukumisa i-wifi, phakathi kobunye ubunzima, nginqume ukuthi ngizame nge-fedora 15, isipiliyoni besingahlukile kakhulu kwezinye izinto, ikakhulukazi ekucushweni kwe-intanethi, engikubona kubi kakhulu kune-ubuntu, kepha ezinye izinkinga zishintshile ikakhulukazi engxenyeni yokuzinza. Iphuzu eliyinhloko ekuphawuleni kwami ​​ukuthi kumsebenzisi ojwayelekile noma wendabuko ubunzima buncishiswe kakhulu kuze kube seqophelweni lokuthi kungathiwa ukusatshalaliswa kwe-linux eyodwa kungcono kunenye (ngazi kuphela ubuntu ne-fedora). Kodwa-ke, ngisenobunzima obuningi, ngoba ingxenye enkulu yezinto azenzile zidinga isoftware enamandla futhi ekhethekile (ukusebenza okuphezulu kwesayensi computing) futhi kuleso sici ngithole umehluko omkhulu kulokhu kusatshalaliswa okubili, umbuzo ungivele kimi uma amaqoqo wamaphakeji (lawo akhethekile) okulethwa yikho kokubili isoftware yamahhala nomthombo ovulekile ngoba kwezinye izimo ahluke kakhulu futhi kokunye amaphakheji asevele engasasebenzi futhi ayekile ukwakhiwa, njengemitapo yolwazi yeLabPlot e-fedora ( iphelelwe yisikhathi) nokunyamalala kwe-qtiplot e-fedora (ngicabanga ukuthi iyaqhubeka ku-ubuntu) okuyiyona nto esondele kakhulu ku-OriginLab ngendlela ebizayo. Kulolu hlobo lwesimo ngibonile ukuthi kunezimbungulu eziningi ku-Ubuntu kune-fedora, ngakho-ke izinguquko zomsebenzisi wendabuko zibalulekile futhi kubasebenzisi abathile kwezinye izimo akunjalo, kungenzeka ukuthi ukuphawula kwami ​​akulungile ngokuphelele ngakho-ke ngiyaxolisa. njengoba ngishilo ekuqaleni ngikhuluma kuphela ngokuhlangenwe nakho kwe-newbie
Phendula kuJavier del Cristo
nge-fedora 16 gnome-Shell isuka ntambama nge-free ati hdxxx driver and also with catalysts. Kubuntu naku-arch kungishayisa ngize ngikwenze kungasebenziseki (ngokufometha) angazi ukuthi yini i-fedora enezinkinga zayo kodwa okwamanje inenzuzo enkulu ngaphezu kokunye uma kukhulunywa ngokuhlanganiswa kwegobolondo le-gnome-shell, ku okungenani i-atis enegazi
Yebo, ngizihlabe umxhwele ngalezi zici ezintsha, okujwayele ukwenzeka ku-fedora, kepha lokho "usrmove" akusabonakali kungumbono omuhle, ikakhulukazi ngemuva kokufunda okuthunyelwe ngomsebenzisi we-fedora (othuthuke kakhulu?) Mayelana "Izinkinga" Ngakho-ke, lokho kungaletha lolo shintsho kanye nama-distros nawo azokwenza lokho D:
ngoba iqiniso lisho izinto ngombono wami ezenza umqondo omkhulu.
Kutholakalela ukuhlolwa kwe-LibreOffice 3.4.5 RC1 no-3.5.0 Beta
I-Muon Suite 1.3 (alpha1) iyatholakala [Izithombe]